နငျ့ကနဲကိုနတောပဲ – My Blog
ကြုပျ သမီး သူ့သူငယျခငျြးနဲ့အတူ ခွံထဲကားမောငျးဝငျလာတာကိုကြုပျအိမျဝရနျတာကနရေပျကွညျ့နမေိတယျ။ သမီးပွောခဲ့ဘူးတာကတော့ သူ့သူငယျခငျြး တဈယောကျဖွဈတဲ့ဒီကောငျမလေးက သူ့အိမျကနယျမှာတဲ့၊ ပွီးခဲ့တဲ့၂လ ၃လလောကျတုနျးက၊ သူ့မိဘနှဈယောကျလုံးကား မတျောတဆမှုဖွဈပွီးဆုံးပါးသှား ကွတယျတဲ့၊ တခွားမှီခိုစရာဆှမြေိုးသားခငျြးရငျးခြာကလဲမရှိဘူးတဲ့၊ ဒါကွောငျ့သူနဲ့ အတျောလရေငျးနှီးတဲ့သူငယျခငျြးဖွဈသူကြုပျသမီးဆီမှာ ခဏအတူ ခိုလှုံနထေိုငျခှငျ့တောငျးတယျ။ လောလောဆယျသူ့ခမွာမှာလဲ ငှကွေေးကမလုံလောကျရှာတော့ အဆောငျလေး အခနျးလေးငှားနဖေို့တောငျမတတျနိုငျရှာ ဘူး။ အလုပျတဈဘကျနဲ့ကြောငျးတကျနိုငျဖို့ ကြောငျးခြိနျပွငျပ အလုပျတဈခုကွိုးစားရှာနတေယျတဲ့။ ကြောငျးစရိတျနဲ့ အသုံးစရိတျတှအေတှကျငှလေိုတယျ လေ။ ကြုပျသမီးလေးနာမညျက ခယျြရီတဲ့၊ အသကျက၁၉နှဈ၊ အလှပနျးတှအေစှမျးကုနျဖူးပှငျ့တဲ့အရှယျပေါ့၊ သမီးက ကားကိုအိမျရှရေ့ပျပွီး ၂ယောကျသား အိမျထဲလြှောကျဝငျလာခဲ့ရငျးနဲ့.. “မင်ျဂလာပါ..အမယျ.. ပါ့ပါးကဒီနစေ့ောလှခညျြလား..? အသေးလေးတှထှေကျမရှာတော့ဘူးလား…” ကွညျ့..ကွညျ့..သမီး လိမ်မာမရှခြေောက သူငယျခငျြးရှမှေ့ာအဖကေိုလာဒေါကျဖွုတျနတေယျ..၊ ဟုတျတယျလခေါတိုငျးကြုပျကအိမျသိပျကပျတာမှမဟုတျပဲ၊ ခုအိမျအရငျရောကျ နတောကိုပဲ အထူးအဆနျးကွီးလိုလို.. “ဟ..ငါ့သမီးကအရှယျနဲ့မလိုကျအောငျအတျောအတှေးအချေါတှအေတျောမွငျ့နပေါလားကှ၊ ပါးအိမျပွနျနောကျကြ တိုငျးခြျောတောငေါ့ပွီးလြှောကျတှေးမနနေဲ့၊ အခုလဲသမီးတို့ကိုစောငျ့နရေုံသကျသကျပဲ.. ထငျရာလြှောကျပွောနရေငျ တကယျပဲမမေလေေးအသဈရှာလာ ပေးခဲ့ရမလား..” “နောကျတာပါ ပါးရဲ့..ဒီမှာ သမီးပွောဘူးတဲ့သူငယျခငျြးလေ၊ ခြိုခြိုထှနျး..တဲ့..သမီးတို.ကတော့ထှနျးလို့ပဲချေါကွတယျ။
ဟဲ့..ထှနျး..ဒါ က ငါ့ပါပါး ဦးရဲဝငျးအောငျ..လေ” သမီးက သူ့သူငယျခငျြးဟု ထှနျးဆိုတဲ့ခလေးမလေးကို ကြုပျနဲ့မိတျဆကျပေးတယျ။ “မင်ျဂလာပါ အနျကယျ..” “အေးကှယျ..မင်ျဂလာပါသမီး..” ထှနျးကကြုပျကိုပွုံးပွီးတလေးတစားနှုတျဆကျတယျ။ ခလေးမကကွညျ့ရတာ ခြောခြောသနျ့သနျ့လေးပဲ၊ အဲ..ဒါ ပမေယျ့…၊ ဆံတို ဘိုကနေဲ့ယောကျြားလေးဒီဇိုငျး၊ ကွညျ့ရတာ တှမျဘှိုငျး (ကြုပျတို့အချေါ )၊ အခုခတျေအချေါတော့ ဘာတဲ့..အဲ..ဘောပွားဆိုလား..ပုံစံကွညျ့ ရုံနဲ့ အဲဒါဖွဈဖို့ကြိနျးသနေပွေီ။ မွနျမာလိုဆိုယောကျြားလြာပေါ့..။ ကြုပျကအတှေးလှနျရငျးသခြောအာရုံစိုကျကွညျ့နမေိသလိုဖွဈနတေော့ သမီးခယျြရီက… “ပါ့ပါး…အမယျ..သမီးသူငယျခငျြးကိုဘယျလိုကွီးကွညျ့နတောလဲလို့…၊ သူငယျခငျြးက ငတိုငရှိုမဟုတျပါဘူး” “ဟာ..အေးးး ဆောရီး..ဆောရီး၊ သမီး ကလဲကှာ..၊ ပါပါးကနဲနဲအတှေးလှနျသှားလို့ပါ၊ အမှတျတမဲ့မို့… ကဲ..ကဲ..အေးအေးဆေးဆေးလှတျလှတျလပျလပျသာနကွေပတေော့၊ ကိုယျ့အိမျလို့သာ သဘောထား…ကွားလား..ထှနျး..” “ကြေးဇူးပါခမွ..အဲအဲ..ကြေးဇူးပါရှငျ့ အနျကယျလျ” “အဲ…အေးပါကှာ..ခမွလဲခမွ ပေါ့..၊ ပါးအတှကျကတော့အရေးမ ကွီးပါဘူး၊ အဆငျပွသေလို၊ သကျသာသလိုသာပွောပါ..ပါးကတော့အေးဆေးပါ၊ ကဲသမီးတို့ ပစ်စညျးတှအေပျေါတငျပွီး ခယျြရီ့အခနျးမှာပဲနရောခလြိုကျ ပေါ့၊ ပွီးမှဆငျးလာပွီးထမငျးစားကွ” “ဟုတျ..ပါ့ပါ…” ဒီလိုနဲ့ထှနျးဆိုတဲ့ကောငျမလေးကြုပျတို့အိမျလာနတော ၂လလောကျတောငျရှိလာခဲ့ပွီ။ ကြုပျအမွငျ တော့ ဒီကလေး၂ယောကျကွညျ့ရတာ ဒီဇိုငျးကတဈနတေ့ဈခွား သမီးရညျးစားပုံစံမြိုးပိုပိုပေါကျလာသလိုပဲ။ ကြုပျအကွောငျးပွောရရငျဖွငျ့ ကြုပျမိနျးမက ဆုံးသှားရှာတာ ၃-၄ နှဈလောကျရှိပွီဗြာ။ မိနျးမကြုပျတို့ကိုထားသှားပွီးထဲ့နောကျ ကြုပျကလဲစီးပှားတဈဘကျနဲ့ သမီးမိနျးကလေးကို အနီးကပျစောငျ့ရှောကျ ထိမျးကှပျပေးဖို့အခြိနျကလဲမရှိတာနဲ့၊ သူ့အမဘေကျကအဖှားကကွညျ့ပေးထားလို့၊ အဖှားအိမျပွောငျးပွီးနနေရေတယျ။
အခု ၁၀တနျးအောငျလို့ တက်ကသိုလျတကျရတော့မှပဲ၊ ရနျကုနျပွနျပွီး ကြုပျနဲ့အတူအိမျလာပွနျနဖွေဈတော့တယျလေ။ ဒီမှာက သမီးရဲ့ပညာရေးနဲ့ အသှားအလာကပိုပွီးအဆငျပွတေယျမဟုတျလား..။ ကြုပျက..ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောရရငျ လိငျစိတျပွငျးသူ၊ လှယျလှယျဆိုကွပါစို့ ဆကျဈကိစ်စတှမှောထနျ တတျတဲ့ယောကျြားစားမြိုးပေါ့၊ ပွီးတော့ မုဆိုးဖိုဖွဈခဲ့တာနှဈအတျောကွာပွီ။ နောကျအိမျထောငျပွုဖို့တော့စိတျကူးမရှိသေးဘူး၊ ဒီကိစ်စတဈခုထဲနဲ့လောပွီး နောကျမိနျးမယူ၊ အပွီးအပိုငျအခညျြမခံနိုငျသေးဘူးလေ၊ စိတျတိုငျးကလြကျတှဲဖျောမတှတေ့ာလဲပါတာပေါ့..။ သမီးအိမျပွနျလာမနခေငျတုနျးက နဲနဲပါးပါး တော့အပွငျထှကျကဲသဗြ။ အဲ..သမီးပွနျလာနတေော့ အနအေထိုငျဆငျခွငျရတယျ၊ သမီးကိုလဲပူပငျလို့ကောငျးကောငျးထိမျးကှပျ၊ ကိုယျလဲထှကျမကဲဖွဈ တော့ဘူး။ ကိုယျစိတျပါသလိုလြှောကျလုပျနရေငျ၊ သမီးသိသှားရငျ သူ့ကိုအုပျထိမျးရတာနဲနဲအဖုအထဈရှိမယျလေ။ ဒါတောငျသမီးက အဖအေလုပျကိစ်စနဲ့ အိမျပွနျနောကျကတြာကိုပဲ အကကြောကျပွီးရိတိတိနဲ့…၊ စောစောပိုငျးက ခငျဗြားတို့ဖတျခဲ့သလိုမြိုးပေါ့၊ အသေးလေးတှသှေားမရှာဘူးလားဘာလားနဲ့…၊ အဖကေိုပွောပုံက..ကွညျ့..။ အေးလေ..သူလဲငယျတော့တာမှမဟုတျပဲ၊ အဖဘေ့ကျကိုစဉျးစားပေးပွီး၊ ဖွဈနိုငျတာတှတှေေးချေါမိတာလဲရှိမှာပေါ့။ အဲဒီလို ဆငျဆငျခွငျခွငျနရေတော့ကြုပျမလဲ နဲနဲတော့ပွတျလပျသလိုဖွဈနပွေီး ဆာနပွေီပေါ့ဗြာ။ ဒီတော့လဲညအိပျရာဝငျလူခွတေိတျမှာဂှငျးကလေးနဲ့ ၂ပါးသှားရ တော့တာပေါ့၊ ဒါပဲရှိတာပဲ…။ ဟော…အခုတော့ တဈအိမျထဲမှာခုလို အပြိုမဒမျးလေးတှကေ နီးနီးကပျကပျ လာနနေတေော့ ပိုဆိုးတာပေါ့ဗြာ…။ ကြုပျပွော တဲ့အထဲကြုပျသမီးပါပါသဗြ၊ သမီးခယျြရီသူ့အဖှားဆီစပွီးသှားနတေုနျးက အပြိုတောငျကောငျးကောငျးမဖွဈသေးဘူး၊ ကလေးရှိသေးတာ။ အခုပွနျ ရောကျလာတော့အတောငျအလကျစုံစုံလငျလငျ ကွှကွှရှရှနဲ့…။
စောစောကပွောသလို၊ အိမျကဟာမလေး၂ကောငျက ကွညျ့ရငျးကွညျ့ရငျး အနအေထိုငျက၊သမီးရညျးစားပုံ ပိုပိုပေါကျလာတယျ၊ အိမျမှာနတေော့လဲ လှတျလှတျလပျလပျနကွေလတေော့ အဝတျအစားကအစ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသကျသကျသာသာဝတျကွတယျ။ ရာသီဥတုကလဲပူတော့၊ တီရှပျလညျဟိုကျတို့၊ မိနျးမဝတျစှပျကယျြလကျပွတျတို့၊ တခါတလအေတှငျးခံတောငျခံမဝတျကွတော့ဘူး။ အောကျပိုငျးကလဲဘောငျးဘီတိုပါးပါး၊ အဝကယျြပှပှကွီးတှဝေတျကွ တော့ (လဝေငျလထှေကျကောငျးအောငျလားတော့မသိ…) သူတို့ကလဲအဖကေို့သိပျရှကျကွောကျကွတော့တာမဟုတျဘူး။ ကြုပျမှာတော့မကွညျ့ခငျြမွငျ ရကျသား…၊ တဈခါကုနျးလိုကျနို့ဖိတျကလြိုကျ….. တဈခါထိုငျလိုကျလြှာထုတျပွလိုကျ….နဲ့….။ ကြုပျလဲယောကျြားတဈယောကျပဲလဗြော။ မွငျတော့လဲလီး ကမနနေိုငျမထိုငျနိုငျတောငျလာရတော့တာပေါ့..၊ ကြုပျမှာ ခဏခဏ ကွိတျကွိတျဂှငျးထုပွီး၊ ထထလာတဲ့စိတျတှပွေလြေော့အောငျကွိုးစားနရေတယျ။ ကြုပျစိတျထဲမှာလဲ ကြုပျရဲ့အမူအရာတှကေိုခယျြရီမက သိနသေလို၊ စူးစမျးနသေလိုပဲလို့လဲခံစားနရေတယျ။ ဘယျလိုလဲတော့မသိဘူး၊ မသိစိတျကနှိုးဆျော နသေလိုပေါ့..။ ဒီလိုနလောရငျးနဲ့ပဲ၊ တဈညမှာပေါ့… အဲ့ဒီညက ကြုပျလဲအောကျထပျကအလုပျစားပှဲမှာ အာရုံစိုကျလုပျနမေိတာ အခြိနျကုနျလို့ကုနျသှားမှနျးမ သိလိုကျဘူး။ ကြုပျသတိထားမိလို့အိပျရာဝငျတော့မယျလုပျမှ တျောတျောတောငျညဥျ့နကျနပွေီပဲ။ ကြုပျလဲအိပျရာဝငျမှပါပဲလဆေိုပွီး၊ ကြုပျအိပျခနျးကိုသှား မလို့အိမျအပျေါထပျတကျအလာ..၊ ကြုပျသမီးခယျြရီရဲ့အခနျးကိုဖွတျသှားရတာပေါ့..။ အဲဒီမှာပုံမှနျမဟုတျဘူးလို့ကြုပျထငျလိုကျတဲ့အသံတိုးတိုးကွိတျ ကွိတျလေးတှကွေားလိုကျရတယျဗြ..။ “ရှီးးးး ကြှတျကြှတျ… အမလေးကောငျးလိုကျတာ.. ငါ့နို့ကိုခပျပွငျးပွငျးလေးစို့ပေးစမျးပါ ထှနျးရယျ..စဈ..” ကြုပျ အတျောစိတျဝငျစားသှားတယျ။ ဖွေးဖွေးခငျြးခွေ၃လှမျးလောကျပွနျဆုတျလာတော့ သမီးအခနျးတံခါးရှပွေ့နျရောကျလာတယျ။
ဟုတျတယျ…အထဲမှာ ရှူးရှူးအားအား အသံတှကွေားနရေတယျ၊ ကြုပျတံခါးလကျကိုငျဖုကိုအသာလေးစမျးပွီးကွိတျလှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့… “ဟာ…လ ခှီး..တံခါးလော့ခမြထားဘူးပဲ..” ကြုပျဒိတျကနဲဖွဈပွီးတိုးတိုးလေးရရှေတျမိတယျ။ ကြုပျရငျတှကေလဲတျောတျောခုနျနတေယျ။ တံခါးကိုအသာတှနျးကွညျ့ တော့တဈထှာလောကျဟသှားတယျ၊ အခနျးထဲမှာကမီးပိတျမထားဘူး။ အဲဒီတဈထှာလောကျဟသှားတဲ့တံခါးက အမွငျထောငျ့ကလဲ သမီးကုတငျမွငျကှငျး ကိုဒဲ့ပဲဗြို့..။ ၂ယောကျလုံးအဝတျအစားမပါကိုယျလုံးတီးတှဖွေဈနတေဲ့အပြိုမလေးတှေ ကုတကျပျေါမှာလုံးထှေးဖကျနကွေတာဗြ။ ကြုပျကကိုယျ့သမီးပဲဆို တော့အရငျက ခယျြရီ့ကိုတကယျသတိထားပွီးမကွညျ့ခဲ့မိဖူးဘူး၊ ကြုပျပွောခငျြတာသဘောပေါကျပါတယျနျော။ ကိုယျ့သမီးငယျလေးဆိုပွီး ခလေးကလေး လိုမွငျတာဗြ၊ အရှယျရောကျပွီးသားမိနျးမတဈယောကျလို၊ ဆျောတဈဗှလေိုမွငျခဲ့တာမဟုတျဘူး။ အခုတော့ဗြာကိုယျလံးတီးလေးအဖှေးသားမွငျလိုကျရ တော့ကြုပျဖွငျ့မကျြစိတှပွောသှားတာပဲ။ အခုတော့ကြုပျသမီးက အပြိုကွီးဖားဖား၊ ပွညိ့ပွညျ့၀၀၊ တလုံးတခဲကွီးဖွဈနပေါပေါ့လား…။ နကျမှောငျနတေဲ့ ဆံပငျရှညျလေးတှကေဖွူဖှေးနတေဲ့ရငျအုံ၊ ပုခုံးသား၊ ကြောပွငျတှပေျေါမှာဖွနျ့ကွဲကနြတောက ဆကျစီဆနျလှတယျ။ ဖွူဝငျးနတေဲ့အသားရောငျ၊ ပွညျ့တငျးနတေဲ့ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးအသီးသီး၊ ဖောငျးအိလုံးဝနျးနတေဲ့ ရငျအုံနဲ့နို့လေးတှကေ ပကျလကျအိပျနတေဲ့အခြိနျလေးမှာ ရငျဘတျပျေါ အုနျးမှုတျခှကျကလေး ၂ခုမှောကျထားသလိုပဲ..၊ ဗိုကျသားလေးတှကေတြော့အဆီပွငျမတကျသေးတော့ပါးပါးရှပျရှပျလေးတှဗြော။ စောကျဖုတျကလေးကြ တော့သူ့အသကျအရှယျနဲ့စာရငျအကွီးသားဗြ၊ လိပျကြောကုနျးလေးလိုခုံးခုံးဖောငျးဖောငျးလေးရယျ..။ ဒါပမေယျ့ခငျဗြားတို့တှဖေူ့းနကြေ အခှံမဲမဲလိပျခုံး လေးမဟုတျဘူးနျော၊ အမှေးနုနုပါးပါးလေးတှပေဲယှကျဖုံးနတေော့အသားရောငျဝငျးဝငျးစောကျဖုတျအိအိလေးကို အတိုငျးသားထငျးထငျးကွီးမွငျနရေ တော့၊ ကြုပျလီးကငွိမျဝပျပိပွားမှုမရနိုငျတော့ဘူးပေါ့ဗြာ။
ထှနျးဆိုတဲ့ဘောပွားလေးကလဲအနိုငျမခံအရှုံးမပေးပဲဗြို့။ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးဖှံ့ဖွိုးပုံက သမီးခယျြရီနဲ့နငျလားငါလားပဲ၊ သမီးနဲ့ဆို ဆံပငျရှညျတာနဲ့အတို ထားတာပဲကှာတယျ။ ယောကျြားလြာလေးသာဆိုတယျ၊ ခြှတျလိုကျတော့လဲပွူးပွဲနတောပဲဗြ…။ ထှနျးရဲ့စောကျဖုတျကတြော့ အမှေးတှထေူပိနျးနတောဗြ။ အမှေးသနျတဲ့အမြိုးနဲ့တူတာပဲ။ ဆီးစပျတဈခုလုံးမဲထူနလေို့စောကျဖုတျသားကိုတောငျမမွငျရဘူး။ ထှနျးကသမီးခယျြရီရဲ့နို့တှကေိုလကျနှဈဘကျနဲ့အားရပါးရ ညှဈနယျနတေယျ။ မာတောငျနတေဲ့နို့သီးခေါငျးလေးတှကေိုလဲလကျဖြားလေးတှနေဲ့ဖိလိုကျညှဈလိုကျနဲ့ပေါ့။ စိတျတှထေနျသထကျထနျလာတာနဲ့အမြှ ထှနျး ကပါးစပျဟပွီး ခယျြရီရဲ့နို့တှကေိုဖမျးဟပျပွီးအငမျးမရစို့တော့တာပဲဗြို့..။ ဘယျဘကျကိုစို့လိုကျ၊ ညာဘကျကိုစို့လိုကျ..။ “အားးးးး အမလေး…ကောငျးလိုကျ တာထှနျးရယျ..ရှီးးး စဈ” ထှနျးကပါးစပျကိုနို့အုံကဖွုတျလိုကျပွီး လြှာနဲ့တလှားခငျြးတဈကိုယျလုံးကိုလကျြဆငျးလာခဲ့တာခကျြအထိရောကျလာပွီ။ ထှနျးက ခကျြတှငျးလေးကိုနျှိုကျပွီးလြှာနဲ့ထိုးထိုးလကျြတော့ခယျြရီမှာ တှနျ့ကနဲ..တှနျ့ကနဲ..။ ထှနျးကလြှာကိုလကျြဆငျးလာတာဆီးခုံမှေးပါးပါ်းဗလေးတှဆေီ ရောကျလာပွီ။ ထှနျးရဲ့ညာလကျကခယျြရီရဲနို့တှကေိုနယျနတေုနျးပဲ၊ ဘယျလကျကတော့စောကျဖုတျဆီရှလေ့ာပွီးစောကျစိကိုခနြေပွေီလေ။ အဲ့ဒီအခိုကျ အတနျ.မှာကြုပျလညျး တဈခုခုကိုဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျပွီးတံခါးရှကျကိုဖွေးဖွေးတှနျးဖှငျ့လိုကျတယျ။ ပွီးတော့ကိုယျကိုတစောငျးလေးလြှိုပွီးအခနျးထဲဝငျ လိုကျပွီးတော့အခနျးဝမှာပဲအတျောကွာငွိမျပွီးရပျနမေိတယျ။ လူကသာငွိမျနတောလီးကတော့ပေါကျကှဲထှကျမတတျတောငျနပွေီ။ မိနျးကလေး၂ယောကျ ကတော့သူတို့ဇောနဲ့သူတို့မို့…အခနျးထဲမှာဧညျ့သညျတဈယောကျရောကျနပွေီး သူတို့နဲ့ပူးပေါငျးပြျောရှငျဖို့ကွံနတေယျဆိုတာမသိကွသေးဘူး။ ထှနျးက နရောရှလေို့ကျပွီးဖငျကိုမွှောကျလို့ဒူးထောကျတဲ့ပိုဇရှေငျပွောငျးလိုကျတယျ။
လကျနှဈဘကျနဲ့ ခယျြရီရဲ့တကောကျကှေးတဈဖကျတဈခကျြကိုကိုငျပွီးဘေးကိုဖိလို့ဖွဲခလြိုကျတော့ ခယျြရီရဲ့စောကျဖုတျလေးက ဟဟလေးပွဲထှကျသှား တယျ။ ဒီတော့စောကျခေါငျးအတှငျးသားပနျးရောငျရငျ့ရငျ့လေးကိုမွငျလိုကျရတယျ။ စောကျရကွေညျတှစေိမျ့ထှကျလာနပွေီဖွဈလို့ အခနျးမီးအလငျးရောငျ နဲ့လကျလကျပွောငျနတေယျလို.ထငျရတယျ။ ထှနျးကအရညျတှရှေဲနတေဲ့ခယျြရီရဲ့စောကျဖုတျဆီကိုကုနျးလို့မကျြနှာအပျလိုကျပွီး၊ လြှာကိုထုတျလို့ စောကျ ဖုတျဝနှုတျခမျးသားတှရေော၊ စောကျခေါငျးအတှငျးသားတှကေိုပါ စိမျပွနေပွလေကျြတော့တယျ။ ပွီးတော့စောကျစိလေးကို လြှာဖြားလေးနဲ့မထိတထိထိုး ပွီးကလိပေးနလေိုကျတာ၊ ခယျြရီရဲ့ဖငျကကုတငျနဲ့မထိတော့ပဲလထေဲမှာကွှတကျနပွေီး၊ ထှနျးရဲ့လြှာကစားမှုကိုတုနျ့ပွနျပေးနတေော့တာ။ “အိုးးး ကောငျး လိုကျတာ၊ အရသာရှိလိုကျတာနျော..၊ စောကျဖုတျရော၊စောကျစိရောပဲ၊ ရှီးးး…အားးးး” သမီးခယျြရီကိုဘာဂြာကိုငျပေးနရေငျနဲ့ ဘောပွားလေး ထှနျးတဈ ယောကျမှာလဲ ကွညျ့ရတာကာမဆိပျဖီလငျတှအေပွတျတကျလာနပေုံရတယျ။ ကုနျးမှုတျနရေငျးက သူ့ရဲ့ဘယျလကျနဲ့ သူ့စောကျဖုတျကိုပွနျနှိုကျနပွေီးထုတျ လိုကျသှငျးလိုကျပှတျဆှဲနတော၊ ကွညျ့ရငျးနဲ့စောကျရတှေကေလကျခြောငျးတှမှောပပွေီးစီးကလြာနတေယျ။ ကြုပျမှာလဲဆကျပွီးအောငျ့မနနေိုငျတော့ဘူး၊ ကြုပျဝတျထားတဲ့ညဝတျအကငြ်္ီကိုခြှတျ၊ ဘောငျးဘီကိုလဲကွမျးပျေါပုံခလြိုကျတော့ မွငျးလီးအငယျစားလောကျရှိတဲ့ကြုပျလီးကွီးကဖွောငျးကနဲကနျထှကျ လာပွီး၊ ပုတျသငျညိုတဈကောငျလိုခေါငျးက ဆတျဆတျ..ဆတျဆတျ..နဲ့၊ ကြုပျရဲ့မကျြလုံးတှကေလဲ ကောငျမလေး၂ယောကျရဲ့စောကျဖုတျတှကေိုစစေ့ငေု့ငု ကွညျ့နေ၊ သုံးသပျနမေိတယျဗြ။ ကြုပျညာလကျကလီးကိုသခြောဆုပျကိုငျထားတယျ။ လီးအရပွေားကိုညှဈပွီးရှတေို့းနောကျဆုတျနဲ့တဖွတျဖွတျဆောငျ့ပွီး ဂှငျးကိုငျပေးနလေိုကျတာလီးကအသားကုနျဆိမျ့တကျလာတယျ။
အဲ့ဒီမှာပဲကြုပျကိုဆတျကနဲလနျ့သှားစတောကတော့၊ ကြုပျသမီးဖွဈတဲ့ခယျြရီမကို နှာထနျထနျနဲ့အကွညျ့လိုကျမိမှာ သမီးရဲ့အကွညျ့မကျြလုံးတဈစုံက ကြုပျ လီးကိုစီုကျပွီးမကျမကျမောမောကွညျ့နတောပါပဲ။ ခယျြရီကအခနျးထဲမှာကြုပျရှိနတောကိုသိသှားပွီလေ။ ထှနျးကတော့ကုနျးမှုတျနလေို.သိပုံမရသေးဘူး။ ခယျြရီ့ပါးစပျက လှိုကျမောတုနျရီစှာနဲ့ ညီးတှားနတေယျ။ “အားးး အမယျလေး ကောငျးလိုကျတာ၊ သတေော့မှာပဲ..၊ ဘယျလိုကွီးမှနျးမသိဘူးးး…ရှီးးး အူးးးး..” အဲ့ဒီအခြိနျမှာပဲကြုပျကိုပိုပွီးထိတျလနျ့သှားစတောကတော့..ထှနျးရဲ့လကျထဲကအရာပဲ..၊ ဘယျနရောကဘယျလိုဆှဲထုတျလာခဲ့တယျမသိ၊ စောစော ကမရှိပါဘူး..။ သူ့လကျထဲမှာ ရာဘာဒီလျဒို လီးအတုကွီးတဈခု၊ ဆိုကျကွီးက L ဆိုကျချေါရမလား အကွီးမှအကွီးကွီးပဲ။ ဘောပွားမ ထှနျးကလီးတုကွီးကို ကြုပျသမီးစောကျဖုတျဝကိုတပွေီ့းဖွေးဖွေးခငျြးထိုးသှငျးတော့တာ..။ “အိုးးး… အမလေး..နာတယျ..နာတယျ..ထှနျး..အဲဒါဘာကွီးလဲ…၊ မကောငျးဘူးး မ လုပျပါနဲ့..ဆှဲထုတျလိုကျ..ပွနျထုတျလိုကျပါ..” “ခယျြရီကလဲကှာ..ဒီလျဒိုပါကှ၊ ခံလို့ကောငျးပါတယျ။ ဒို့..ခယျြရီ့ကို..ရာဘာလီးအတုနဲ့လိုးပါရစကှော..နျော..၊ ဒို့ ခယျြရီ့ကိုခဈြတယျ။ ခယျြရီတခွားသူတှနေဲ့မခဈြရဘူးနျော… ခဏလေးကွိတျခံလိုကျပါကှာ..တျောကွာမနာတော့ပါဘူး၊ ဒို့ကိုယျတိုငျစမျးကွညျု့ပီးပါပွီ..” ထှနျးကပါးစပျကပွောရငျး၊ လကျကလဲခယျြရီရဲ့စောကျပတျထဲ လီးတုကွီးကိုပိုလို့ခပျဖိဖိထိုးထညျ့နတေယျ။ “အိုးးး တအားနာတယျ ထှနျးရဲ့…ပွနျထုတျ..ပွနျ ထုတျလိုကျတော့..၊ အောငျမလေး စောကျဖုတျပွဲပါပွီ..၊ ပါး…ပါ့ပါး..သမီးကိုကယျပါဦးးးး….” ကြုပျလဲ အဲ့သလိုမွငျနရေတော့ကွညျ့မနနေိုငျတော့ဘူးဗြ၊ ဏှာစိတျတှကေပိုထနျလာသလို၊ တဈဘကျကလဲ သမီးအျောနတောတှရေ့တော့ဒေါသတှကေထှကျလာတယျ။ ကြုပျသမီးနုနုထှတျထှတျလေး၊ ရှပေျေါမွတငျမှေးလာတာ တဈခါမှဟုတျတိပတျတိ ပွငျးပွငျးထနျထနျတောငျရိုကျမဆုံးမခဲ့ဖူးဘူး..။
အခုမိရှထှေနျးက ကြုပျသမီးကိုဆကျဈအတှကျအသုံးခြ၊ စောကျဖုတျနာအောငျလာဖွဲတဲ့အယောငျဆောငျသူငယျခငျြးပဲ…။ ကြုပျကုတငျနားကိုခွလှေမျးကွဲ ကွဲနဲ့လြှောကျသှားလိုကျတာ မိရှထှေနျးနောကျကိုဖပျြကနဲရောကျသှားတယျ။ ကြုပျသမီးရဲ့စောကျဖုတျထဲစိတျပါလကျပါကုနျးပွီးထိုးသှငျးနလေို့ နောကျကို ပွူးထှကျနတေဲ့ အမှေးထူထူနဲ့ ဒငျးရဲ့စောကျပတျအဝကို ကြုပျရဲ့ မွငျးလီးအငယျစားလောကျဟာကွီးကိုတပွေီ့း လကျ၂ဘကျကမိထှနျးရဲ့ဖငျကွီးတဘကျတ ခကျြကိုကိုငျ၊ နောကျဘကျကိုအားနဲ့ဆှဲလိုကျပွီး တပွိုငျထဲမှာပဲ ကြုပျကလဲကော့ပွီးအားရပါးရခပျပွငျးပွငျးဆောငျ့ထိုးလိုကျတာ၊ ကြုပျရဲ့ဒဈကွီးကဇိက နဲ..ဖဈြကနဲ..မွညျပွီး ဝငျသှားပါလရေောဗြို့…၊ အဆုံးမဟုတျပမေယျ့ တဈခြီထဲနဲ့ တဈဝကျကြျောဝငျသှားတာနဲတဲ့အားလားဗြာ..။ မိထှနျးတဈယောကျ အငျ့က နဲကိုနသှေားတာပဲ။ သူစောစောကသမီးကိုပွောနသေလို လီးအတုကွီးကိုသူကိုယျတိုငျစမျးခဲ့ပွီးပွီဆိုတော့ ဒီလောကျဝငျသှားတာအံ့သွစရာတော့သိပျ မဟုတျဘူး၊ ကြုပျပစ်စညျးကမွငျးလီးအငယျစားလောကျမို့လို့သာ၊ ဒီဟာမတျောတျောထိသှားတာ၊ တျောရုံလီးဆိုဖွုံမယျ့ပုံမပျေါ..။ “ဟငျ..ဒါဘာလုပျတာလဲ ဗြ..၊ အားးးးး အု..အဈ.. ကနြေျာ့ကိုမလုပျ…မလုပျပါနဲ့ဗြာ..၊ ထုတျပေးပါ၊ ကနြျောနာတယျဗြ.. ” “မငျးက ငါ့သမီးကိုကတြော့ ပွနျထုတျပေးပါလို.သမေတတျ တောငျးပနျတာတောငျ ညှာတာဖို.စိတျမကူးပဲ ဆကျလုပျတယျလေ..၊ ဒီလိုဘယျရမလဲကှ..၊ ဒီတဈခါ မငျးအလှညျ့ပဲ…၊ ဝဋျဆိုတာ လညျတတျတယျကှ..။ ထှနျး ကဖငျကိုခါပွီးရုနျးဖို့၊ ရှောငျဖို့ကွိုးစားတယျ၊ ကြုပျကတော့ဂရုမစိုကျတော့ဘူး။ လီးကိုကြှတျလုနီးပါးအဖြားထိပွနျဆှဲထုတျလာပွီး၊ ထှနျးရဲ့ဖငျဆုံကွီးကိုလဲ နောကျကိုပါနိုငျသမြှပါအောငျဆှဲလိုကျတယျ။ွပီးတော့မှအားပါပါနဲ့တဈခကျြထပျဆောငျ့သှငျးလိုကျပွနျတယျ။ တဈကွိမျပွီးတဈကွိမျထပျထပျပွီးဆောငျ့ ဆောငျ့သှငျးလာတာ တဖွေးဖွေးမွနျလာတာနဲ့အမြှ ဘာနဲ့တူလာသလဲဆိုတော့ ကားအငျဂငျြထဲကပဈစတငျကွီးခုတျနသေလိုပဲ..တဗွောငျးဗွောငျးနဲ့..။
“အိုးးးး ကနြေျာ့ကိုမလုပျပါနဲ့ဗြာ…နာတယျ..တျောပါတော့…” အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ကိုယျလုံးတီးလေးနဲ့ပကျလကျကလေးဖွဈနတေဲ့ သမီးခယျြရီရဲ့မကျြနှာလေးကို ကြုပျကွညျ့လိုကျမိတယျ။ ကြုပျတို့သားအဖ၂ယောကျမကျြလုံးခငျြးဆိုငျမိပွီးအဓိပ်ပယျပေါငျးမြားစှာပါတဲ့အကွညျ့တှနေဲ့ပေါ့။ သမီးရဲ.ရာဂမကျြဝနျး နဲ.အကွညျ့တှကွေောငျ့ကြုပျကိုယျထဲကသှေးတှပေိုဆူလာသလိုသလိုပဲ၊ စိတျတှလေဲအသားကုနျထနျတကျလာတာနဲ့ ထှနျးကိုဖငျကုနျးပွီးဆျောနတေဲ့ဆောငျ့ ခကျြတှကေမရပျတော့ဘူး၊ မနားတမျးပဲ..။ ယောကျြားလြာမလေးထှနျးရဲ့ငွငျးဆနျရုနျးကနျမှုတှကေ တဖွေးဖွေးအားပြော့၊ လြော့ကလြာတာသတိထား လိုကျမိတယျဗြ။ “အားးး ကြှတျ ကြှတျ..ဟငျးးး ကောငျးပါပွီ..သဘောတူပါပွီဗြာ.. ထှနျးကိုကွိုကျသလိုသာလုပျပါတောါ…အားး အဟငျ့..ပါ ပါးး..အငျ့..အငျ့..” ဘောပွားလေးလဲ တဖွေးဖွေးနဲ့စိတျပါလကျပါဖွဈလာပုံရတယျ။ ကြုပျဆောငျ့ခလြိုကျတဲ့အကွိမျတိုငျးမှာဖငျကွီးကိုကော့ကော့ပွီးနောကျ ကိုပဈပဈတငျပေးနတေော့တာ။ ကြုပျအထငျ လီးအစဈရဲ့အရသာ၊ ယောကျြားဆိုတဲ့အရသာကို..အခုမှသိသှားပွီထငျတာပဲ။ “အပါး..အပါး.. မွနျမွနျ လေး..ပွငျးပွငျးလေးလုပျပေးပါ၊ ထှနျး..ထှနျး..မနာတော့ဘူး၊ ကောငျးတယျ၊ သိပျကောငျးတာပဲ..အိုးးးး… ထှနျး အရတှေထှေကျကုနျပွီ..ဟူးးး..အားးးး…” ထှနျးတဈယောကျ ခယျြရီ့အပျေါမှောကျရကျကွီးကသြှားပွီး ခယျြရီကိုတငျးတငျးကွပျကွပျကွီးဖကျထားတယျ။ ကြုပျကတော့သူ့ဖငျကွီးကိုမလှတျသေးဘူး၊ အတငျးဆှဲထားတုနျးပဲ။ ပွီး…ခပျကွမျးကွမျးဆကျဆောငျ့ပွီးလိုးပေးနလေိုကျတယျ။ ကြုပျလဲသိပျမထိမျးနိုငျတော့ဘူးဗြို့၊ ဘယျလိုဖွဈလို့လဲတော့မသိဘူး…။ အခုကြုပျကလိုးတော့သာ ထှနျးကိုလိုးနတော၊ ကြုပျရဲ့မကျြလုံးတှေ၊ အကွညျ့တှေ၊ စိတျတှကေတော့ ကြုပျရဲ့သမီးခယျြရီဆီမှာလေ။ “သမီး လေး..ခယျြရီ..ခယျြရီ..ပါပါးကောငျးလိုကျတာကှာ၊ ပါပါးပွီးခါနီးနပွေီ၊ ထှကျ..ထှကျတော့မယျသမီး..” ဘာမှတော့မဆိုငျဘူးဗြ..၊ ပွီးခါနီးမှာကြုပျ၊ သမီးကို တလို့အျောနမေိတယျ။ ကြုပျ လီးကိုကမနျးကတနျးပဲ ထှနျးရဲ့စောကျဖုတျထဲကဆှဲခြှတျလိုကျပွီး ခယျြရီရဲ့ဘေးနားရှလေ့ာလိုကျတယျ။
အဲ့ဒီမှာပဲကြုပျရဲ့လရညျတှကေ ဖွှတျကနဲ ဖွနျးကနဲ သမီးခယျြရီရဲ့ဆီးစပျနဲ့ဗိုကျသားရှပျရှပျလေးတှပေျေါကိုပနျးထုတျပဈလိုကျတော့တာပဲ…၊ ခ သမီးရဲ့ဗိုကျ ဖွူဖွူလေးပျေါမှာ ကြုပျရဲ့သုကျရညျပဈြပဈြတှေ ပပှေကုနျတော့တာပေါ့..၊ ကွညျ့လို.တောငျတောငျးသေး… “အားးး ရှီး… ကောငျးလိုကျတာကှာ၊ ဒီနေ့ လောကျလီးအရသာရှိတာတခါမှမကွုံဖူးသေးဘူး” ထှနျးကခယျြရီရဲ့ဘေးမှာမကျြနှာကိုကွမျးပွငျပျေါအပျပွီးမှောကျရကျကွီးနဲ့…ပါးစပျကလဲ….၊ “အူးးး စဈ..ရှီး…လီး…လီး…ပါပါးရဲ့လီး.. ယောကျြားလီးအစဈကွီး…ဒီလောကျကောငျးမယျမှနျးလုံးဝမထငျမိဘူး..လီးအစဈကအဲ့လိုကွီးတောငျကောငျးတာလား…! နငျ့ကနဲကိုနတောပဲ..၊ ထှနျးသိပျကောငျးတာပဲ ပါပါးရယျ..” တဖွဈတောကျတောကျနဲ.ကိုညညျးနတေယျလေ။ ကြုပျလဲ မောမောနဲ့ ခယျြရီရဲတခွား ဘေးတဈဘကျမှာ ပကျလကျကွီးဝငျလှဲလိုကျပွီး၊ မကျြစိတှမှေိတျထားလို့အသကျပွငျးပွငျးရှူနမေိတယျ။ ခဏကွာတော့ ဘယျလိုကဘယျလိုလဈကနဲ အိပျပြျောသှားတယျမသိလိုကျဘူး..။ ဘယျလောကျကွာသှားတယျလဲမသိတော့ဘူး။ ကြုပျ အိပျတဈဝကျနိုးတဝကျ ဝတေဝေါးတားနဲ့ ဆတျကနဲအသိစိတျ လေးဝငျလာခြိနျမှာ ကြုပျလီးဆီကနူးနူးညံ့ညံ့အထိအတှတေ့ဈခုကိုခံစားလိုကျရတယျ။ ခံစားခကျြအရသိလိုကျရတာကတော့ လကျဖဝါးနုနုလေးတဈခု ကြုပျ လီးကိုဆုပျပွီး အပျေါအောကျပှတျဆှဲနတော…။ ခံစားခကျြထကျတောငျကြုပျလီးကသိပျမွနျတယျ၊ ခကျြခငျြးပဲထနျပွီးဖွောငျးကနဲထပျတောငျတကျလာပွနျ တော့တာပဲဗြို.။ ကြုပျမကျြစိမဖှငျ့နိုငျလိုကျခငျမှာပဲ တဈစုံတဈရာကကြုပျလီးကိုဆှဲစုပျဝါးမွိုလိုကျပွီး လီးထိပျကနတေဖွေးဖွေးနဈဝငျလာတယျ၊ စပါးကွီးမွှလေား…မဖွဈနိုငျဘူး..။ ဘယျ့နှယျမွှကေလီးကနစေမွိုရမှာလဲ ဟုတျဘူးလား..။
ပွီးတော့မွှမွေိုတာအကွောပေါငျးတဈထောငျဆိမျ့ရမှာလဲ။ “အာ့ာ့.. ကြှတျကြှတျ..” ကွိတျပွီးညညျးနတေဲ့အသံလေးတဈခု….. ကြုပျအသာလေးမကျြလုံး ဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတယျ။ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ခန်ဓာကိုယျအရိပျတဈခု၊ ပကျလကျအိပျနတေဲ့ကြုပျရဲ့ကိုယျပျေါမှာခှပွီးဖွေးဖွေးခငျြးထိုငျခနြတောတှလေို့ကျရ တယျ။ လကျနုနုသေးသေးလေးတဈခုကအပွငျမှာကနျြနသေေးတဲ့ကြုပျလီးတဈဝကျကိုကိုငျထိမျးပွီးနှဲ့နှဲ့သှငျးနတောလေ..။ အဆုံးရောကျခါနီးမှာတော့အား ပါပါနဲ့ဖိခပြွီး.. “အား..ဟား..ဟားးးးးး.. ” ညညျးသံရှညျလေးရဲ့နောကျမှာတော့ ဖငျအားကိုသုံးပွီးရှတေို့းနောကျငငျဖိလို့ကွိတျမှတေော့တာပါပဲ။ ကြုပျ မကျြလုံးတှကေငျြ့သားရလာပွီး အမွငျတှကွေညျလငျလာတဲ့အခါမှာ ကြုပျကိုယျပျေါခှပွီးထငျတိုငျးကွဲနတေဲ့သဏ်ဍာနျကို ပွတျပွတျသားသားမွငျလိုကျရ တော့…..ဟငျ..အထှနျး…….အပါးခဈြတဲ့အထှနျးရယျ..ပွီး။
ကျုပ် သမီး သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ ခြံထဲကားမောင်းဝင်လာတာကိုကျုပ်အိမ်ဝရန်တာကနေရပ်ကြည့်နေမိတယ်။ သမီးပြောခဲ့ဘူးတာကတော့ သူ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်မလေးက သူ့အိမ်ကနယ်မှာတဲ့၊ ပြီးခဲ့တဲ့၂လ ၃လလောက်တုန်းက၊ သူ့မိဘနှစ်ယောက်လုံးကား မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးဆုံးပါးသွား ကြတယ်တဲ့၊ တခြားမှီခိုစရာဆွေမျိုးသားချင်းရင်းချာကလဲမရှိဘူးတဲ့၊ ဒါကြောင့်သူနဲ့ အတော်လေရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကျုပ်သမီးဆီမှာ ခဏအတူ ခိုလှုံနေထိုင်ခွင့်တောင်းတယ်။ လောလောဆယ်သူ့ခမြာမှာလဲ ငွေကြေးကမလုံလောက်ရှာတော့ အဆောင်လေး အခန်းလေးငှားနေဖို့တောင်မတတ်နိုင်ရှာ ဘူး။ အလုပ်တစ်ဘက်နဲ့ကျောင်းတက်နိုင်ဖို့ ကျောင်းချိန်ပြင်ပ အလုပ်တစ်ခုကြိုးစားရှာနေတယ်တဲ့။ ကျောင်းစရိတ်နဲ့ အသုံးစရိတ်တွေအတွက်ငွေလိုတယ် လေ။ ကျုပ်သမီးလေးနာမည်က ချယ်ရီတဲ့၊ အသက်က၁၉နှစ်၊ အလှပန်းတွေအစွမ်းကုန်ဖူးပွင့်တဲ့အရွယ်ပေါ့၊ သမီးက ကားကိုအိမ်ရှေ့ရပ်ပြီး ၂ယောက်သား အိမ်ထဲလျှောက်ဝင်လာခဲ့ရင်းနဲ့.. “မင်္ဂလာပါ..အမယ်.. ပါ့ပါးကဒီနေ့စောလှချည်လား..? အသေးလေးတွေထွက်မရှာတော့ဘူးလား…” ကြည့်..ကြည့်..သမီး လိမ္မာမရွှေချောက သူငယ်ချင်းရှေ့မှာအဖေကိုလာဒေါက်ဖြုတ်နေတယ်..၊ ဟုတ်တယ်လေခါတိုင်းကျုပ်ကအိမ်သိပ်ကပ်တာမှမဟုတ်ပဲ၊ ခုအိမ်အရင်ရောက် နေတာကိုပဲ အထူးအဆန်းကြီးလိုလို.. “ဟ..ငါ့သမီးကအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်အတော်အတွေးအခေါ်တွေအတော်မြင့်နေပါလားကွ၊ ပါးအိမ်ပြန်နောက်ကျ တိုင်းချော်တောငေါ့ပြီးလျှောက်တွေးမနေနဲ့၊ အခုလဲသမီးတို့ကိုစောင့်နေရုံသက်သက်ပဲ.. ထင်ရာလျှောက်ပြောနေရင် တကယ်ပဲမေမေလေးအသစ်ရှာလာ ပေးခဲ့ရမလား..” “နောက်တာပါ ပါးရဲ့..ဒီမှာ သမီးပြောဘူးတဲ့သူငယ်ချင်းလေ၊ ချိုချိုထွန်း..တဲ့..သမီးတို.ကတော့ထွန်းလို့ပဲခေါ်ကြတယ်။
ဟဲ့..ထွန်း..ဒါ က ငါ့ပါပါး ဦးရဲဝင်းအောင်..လေ” သမီးက သူ့သူငယ်ချင်းဟု ထွန်းဆိုတဲ့ခလေးမလေးကို ကျုပ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ “မင်္ဂလာပါ အန်ကယ်..” “အေးကွယ်..မင်္ဂလာပါသမီး..” ထွန်းကကျုပ်ကိုပြုံးပြီးတလေးတစားနှုတ်ဆက်တယ်။ ခလေးမကကြည့်ရတာ ချောချောသန့်သန့်လေးပဲ၊ အဲ..ဒါ ပေမယ့်…၊ ဆံတို ဘိုကေနဲ့ယောက်ျားလေးဒီဇိုင်း၊ ကြည့်ရတာ တွမ်ဘွိုင်း (ကျုပ်တို့အခေါ် )၊ အခုခေတ်အခေါ်တော့ ဘာတဲ့..အဲ..ဘောပြားဆိုလား..ပုံစံကြည့် ရုံနဲ့ အဲဒါဖြစ်ဖို့ကျိန်းသေနေပြီ။ မြန်မာလိုဆိုယောက်ျားလျာပေါ့..။ ကျုပ်ကအတွေးလွန်ရင်းသေချာအာရုံစိုက်ကြည့်နေမိသလိုဖြစ်နေတော့ သမီးချယ်ရီက… “ပါ့ပါး…အမယ်..သမီးသူငယ်ချင်းကိုဘယ်လိုကြီးကြည့်နေတာလဲလို့…၊ သူငယ်ချင်းက ငတိုငရှိုမဟုတ်ပါဘူး” “ဟာ..အေးးး ဆောရီး..ဆောရီး၊ သမီး ကလဲကွာ..၊ ပါပါးကနဲနဲအတွေးလွန်သွားလို့ပါ၊ အမှတ်တမဲ့မို့… ကဲ..ကဲ..အေးအေးဆေးဆေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်သာနေကြပေတော့၊ ကိုယ့်အိမ်လို့သာ သဘောထား…ကြားလား..ထွန်း..” “ကျေးဇူးပါခမြ..အဲအဲ..ကျေးဇူးပါရှင့် အန်ကယ်လ်” “အဲ…အေးပါကွာ..ခမြလဲခမြ ပေါ့..၊ ပါးအတွက်ကတော့အရေးမ ကြီးပါဘူး၊ အဆင်ပြေသလို၊ သက်သာသလိုသာပြောပါ..ပါးကတော့အေးဆေးပါ၊ ကဲသမီးတို့ ပစ္စည်းတွေအပေါ်တင်ပြီး ချယ်ရီ့အခန်းမှာပဲနေရာချလိုက် ပေါ့၊ ပြီးမှဆင်းလာပြီးထမင်းစားကြ” “ဟုတ်..ပါ့ပါ…” ဒီလိုနဲ့ထွန်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးကျုပ်တို့အိမ်လာနေတာ ၂လလောက်တောင်ရှိလာခဲ့ပြီ။ ကျုပ်အမြင် တော့ ဒီကလေး၂ယောက်ကြည့်ရတာ ဒီဇိုင်းကတစ်နေ့တစ်ခြား သမီးရည်းစားပုံစံမျိုးပိုပိုပေါက်လာသလိုပဲ။ ကျုပ်အကြောင်းပြောရရင်ဖြင့် ကျုပ်မိန်းမက ဆုံးသွားရှာတာ ၃-၄ နှစ်လောက်ရှိပြီဗျာ။ မိန်းမကျုပ်တို့ကိုထားသွားပြီးထဲ့နောက် ကျုပ်ကလဲစီးပွားတစ်ဘက်နဲ့ သမီးမိန်းကလေးကို အနီးကပ်စောင့်ရှောက် ထိမ်းကွပ်ပေးဖို့အချိန်ကလဲမရှိတာနဲ့၊ သူ့အမေဘက်ကအဖွားကကြည့်ပေးထားလို့၊ အဖွားအိမ်ပြောင်းပြီးနေနေရတယ်။
အခု ၁၀တန်းအောင်လို့ တက္ကသိုလ်တက်ရတော့မှပဲ၊ ရန်ကုန်ပြန်ပြီး ကျုပ်နဲ့အတူအိမ်လာပြန်နေဖြစ်တော့တယ်လေ။ ဒီမှာက သမီးရဲ့ပညာရေးနဲ့ အသွားအလာကပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား..။ ကျုပ်က..ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် လိင်စိတ်ပြင်းသူ၊ လွယ်လွယ်ဆိုကြပါစို့ ဆက်စ်ကိစ္စတွေမှာထန် တတ်တဲ့ယောက်ျားစားမျိုးပေါ့၊ ပြီးတော့ မုဆိုးဖိုဖြစ်ခဲ့တာနှစ်အတော်ကြာပြီ။ နောက်အိမ်ထောင်ပြုဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိသေးဘူး၊ ဒီကိစ္စတစ်ခုထဲနဲ့လောပြီး နောက်မိန်းမယူ၊ အပြီးအပိုင်အချည်မခံနိုင်သေးဘူးလေ၊ စိတ်တိုင်းကျလက်တွဲဖော်မတွေ့တာလဲပါတာပေါ့..။ သမီးအိမ်ပြန်လာမနေခင်တုန်းက နဲနဲပါးပါး တော့အပြင်ထွက်ကဲသဗျ။ အဲ..သမီးပြန်လာနေတော့ အနေအထိုင်ဆင်ခြင်ရတယ်၊ သမီးကိုလဲပူပင်လို့ကောင်းကောင်းထိမ်းကွပ်၊ ကိုယ်လဲထွက်မကဲဖြစ် တော့ဘူး။ ကိုယ်စိတ်ပါသလိုလျှောက်လုပ်နေရင်၊ သမီးသိသွားရင် သူ့ကိုအုပ်ထိမ်းရတာနဲနဲအဖုအထစ်ရှိမယ်လေ။ ဒါတောင်သမီးက အဖေအလုပ်ကိစ္စနဲ့ အိမ်ပြန်နောက်ကျတာကိုပဲ အကျကောက်ပြီးရိတိတိနဲ့…၊ စောစောပိုင်းက ခင်ဗျားတို့ဖတ်ခဲ့သလိုမျိုးပေါ့၊ အသေးလေးတွေသွားမရှာဘူးလားဘာလားနဲ့…၊ အဖေကိုပြောပုံက..ကြည့်..။ အေးလေ..သူလဲငယ်တော့တာမှမဟုတ်ပဲ၊ အဖေ့ဘက်ကိုစဉ်းစားပေးပြီး၊ ဖြစ်နိုင်တာတွေတွေးခေါ်မိတာလဲရှိမှာပေါ့။ အဲဒီလို ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နေရတော့ကျုပ်မလဲ နဲနဲတော့ပြတ်လပ်သလိုဖြစ်နေပြီး ဆာနေပြီပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့လဲညအိပ်ရာဝင်လူခြေတိတ်မှာဂွင်းကလေးနဲ့ ၂ပါးသွားရ တော့တာပေါ့၊ ဒါပဲရှိတာပဲ…။ ဟော…အခုတော့ တစ်အိမ်ထဲမှာခုလို အပျိုမဒမ်းလေးတွေက နီးနီးကပ်ကပ် လာနေနေတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာ…။ ကျုပ်ပြော တဲ့အထဲကျုပ်သမီးပါပါသဗျ၊ သမီးချယ်ရီသူ့အဖွားဆီစပြီးသွားနေတုန်းက အပျိုတောင်ကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးဘူး၊ ကလေးရှိသေးတာ။ အခုပြန် ရောက်လာတော့အတောင်အလက်စုံစုံလင်လင် ကြွကြွရွရွနဲ့…။
စောစောကပြောသလို၊ အိမ်ကဟာမလေး၂ကောင်က ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း အနေအထိုင်က၊သမီးရည်းစားပုံ ပိုပိုပေါက်လာတယ်၊ အိမ်မှာနေတော့လဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြလေတော့ အဝတ်အစားကအစ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသက်သက်သာသာဝတ်ကြတယ်။ ရာသီဥတုကလဲပူတော့၊ တီရှပ်လည်ဟိုက်တို့၊ မိန်းမဝတ်စွပ်ကျယ်လက်ပြတ်တို့၊ တခါတလေအတွင်းခံတောင်ခံမဝတ်ကြတော့ဘူး။ အောက်ပိုင်းကလဲဘောင်းဘီတိုပါးပါး၊ အဝကျယ်ပွပွကြီးတွေဝတ်ကြ တော့ (လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လားတော့မသိ…) သူတို့ကလဲအဖေ့ကိုသိပ်ရှက်ကြောက်ကြတော့တာမဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်မှာတော့မကြည့်ချင်မြင် ရက်သား…၊ တစ်ခါကုန်းလိုက်နို့ဖိတ်ကျလိုက်….. တစ်ခါထိုင်လိုက်လျှာထုတ်ပြလိုက်….နဲ့….။ ကျုပ်လဲယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲလေဗျာ။ မြင်တော့လဲလီး ကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်တောင်လာရတော့တာပေါ့..၊ ကျုပ်မှာ ခဏခဏ ကြိတ်ကြိတ်ဂွင်းထုပြီး၊ ထထလာတဲ့စိတ်တွေပြေလျော့အောင်ကြိုးစားနေရတယ်။ ကျုပ်စိတ်ထဲမှာလဲ ကျုပ်ရဲ့အမူအရာတွေကိုချယ်ရီမက သိနေသလို၊ စူးစမ်းနေသလိုပဲလို့လဲခံစားနေရတယ်။ ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး၊ မသိစိတ်ကနှိုးဆော် နေသလိုပေါ့..။ ဒီလိုနေလာရင်းနဲ့ပဲ၊ တစ်ညမှာပေါ့… အဲ့ဒီညက ကျုပ်လဲအောက်ထပ်ကအလုပ်စားပွဲမှာ အာရုံစိုက်လုပ်နေမိတာ အချိန်ကုန်လို့ကုန်သွားမှန်းမ သိလိုက်ဘူး။ ကျုပ်သတိထားမိလို့အိပ်ရာဝင်တော့မယ်လုပ်မှ တော်တော်တောင်ညဥ့်နက်နေပြီပဲ။ ကျုပ်လဲအိပ်ရာဝင်မှပါပဲလေဆိုပြီး၊ ကျုပ်အိပ်ခန်းကိုသွား မလို့အိမ်အပေါ်ထပ်တက်အလာ..၊ ကျုပ်သမီးချယ်ရီရဲ့အခန်းကိုဖြတ်သွားရတာပေါ့..။ အဲဒီမှာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်ထင်လိုက်တဲ့အသံတိုးတိုးကြိတ် ကြိတ်လေးတွေကြားလိုက်ရတယ်ဗျ..။ “ရှီးးးး ကျွတ်ကျွတ်… အမလေးကောင်းလိုက်တာ.. ငါ့နို့ကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးစို့ပေးစမ်းပါ ထွန်းရယ်..စစ်..” ကျုပ် အတော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ဖြေးဖြေးချင်းခြေ၃လှမ်းလောက်ပြန်ဆုတ်လာတော့ သမီးအခန်းတံခါးရှေ့ပြန်ရောက်လာတယ်။
ဟုတ်တယ်…အထဲမှာ ရှူးရှူးအားအား အသံတွေကြားနေရတယ်၊ ကျုပ်တံခါးလက်ကိုင်ဖုကိုအသာလေးစမ်းပြီးကြိတ်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့… “ဟာ…လ ခွီး..တံခါးလော့ချမထားဘူးပဲ..” ကျုပ်ဒိတ်ကနဲဖြစ်ပြီးတိုးတိုးလေးရေရွတ်မိတယ်။ ကျုပ်ရင်တွေကလဲတော်တော်ခုန်နေတယ်။ တံခါးကိုအသာတွန်းကြည့် တော့တစ်ထွာလောက်ဟသွားတယ်၊ အခန်းထဲမှာကမီးပိတ်မထားဘူး။ အဲဒီတစ်ထွာလောက်ဟသွားတဲ့တံခါးက အမြင်ထောင့်ကလဲ သမီးကုတင်မြင်ကွင်း ကိုဒဲ့ပဲဗျို့..။ ၂ယောက်လုံးအဝတ်အစားမပါကိုယ်လုံးတီးတွေဖြစ်နေတဲ့အပျိုမလေးတွေ ကုတက်ပေါ်မှာလုံးထွေးဖက်နေကြတာဗျ။ ကျုပ်ကကိုယ့်သမီးပဲဆို တော့အရင်က ချယ်ရီ့ကိုတကယ်သတိထားပြီးမကြည့်ခဲ့မိဖူးဘူး၊ ကျုပ်ပြောချင်တာသဘောပေါက်ပါတယ်နော်။ ကိုယ့်သမီးငယ်လေးဆိုပြီး ခလေးကလေး လိုမြင်တာဗျ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသားမိန်းမတစ်ယောက်လို၊ ဆော်တစ်ဗွေလိုမြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ အခုတော့ဗျာကိုယ်လံးတီးလေးအဖွေးသားမြင်လိုက်ရ တော့ကျုပ်ဖြင့်မျက်စိတွေပြာသွားတာပဲ။ အခုတော့ကျုပ်သမီးက အပျိုကြီးဖားဖား၊ ပြညိ့ပြည့်၀၀၊ တလုံးတခဲကြီးဖြစ်နေပါပေါ့လား…။ နက်မှောင်နေတဲ့ ဆံပင်ရှည်လေးတွေကဖြူဖွေးနေတဲ့ရင်အုံ၊ ပုခုံးသား၊ ကျောပြင်တွေပေါ်မှာဖြန့်ကြဲကျနေတာက ဆက်စီဆန်လှတယ်။ ဖြူဝင်းနေတဲ့အသားရောင်၊ ပြည့်တင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအသီးသီး၊ ဖောင်းအိလုံးဝန်းနေတဲ့ ရင်အုံနဲ့နို့လေးတွေက ပက်လက်အိပ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာ ရင်ဘတ်ပေါ် အုန်းမှုတ်ခွက်ကလေး ၂ခုမှောက်ထားသလိုပဲ..၊ ဗိုက်သားလေးတွေကျတော့အဆီပြင်မတက်သေးတော့ပါးပါးရှပ်ရှပ်လေးတွေဗျာ။ စောက်ဖုတ်ကလေးကျ တော့သူ့အသက်အရွယ်နဲ့စာရင်အကြီးသားဗျ၊ လိပ်ကျောကုန်းလေးလိုခုံးခုံးဖောင်းဖောင်းလေးရယ်..။ ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားတို့တွေ့ဖူးနေကျ အခွံမဲမဲလိပ်ခုံး လေးမဟုတ်ဘူးနော်၊ အမွှေးနုနုပါးပါးလေးတွေပဲယှက်ဖုံးနေတော့အသားရောင်ဝင်းဝင်းစောက်ဖုတ်အိအိလေးကို အတိုင်းသားထင်းထင်းကြီးမြင်နေရ တော့၊ ကျုပ်လီးကငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။
ထွန်းဆိုတဲ့ဘောပြားလေးကလဲအနိုင်မခံအရှုံးမပေးပဲဗျို့။ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းဖွံ့ဖြိုးပုံက သမီးချယ်ရီနဲ့နင်လားငါလားပဲ၊ သမီးနဲ့ဆို ဆံပင်ရှည်တာနဲ့အတို ထားတာပဲကွာတယ်။ ယောက်ျားလျာလေးသာဆိုတယ်၊ ချွတ်လိုက်တော့လဲပြူးပြဲနေတာပဲဗျ…။ ထွန်းရဲ့စောက်ဖုတ်ကျတော့ အမွှေးတွေထူပိန်းနေတာဗျ။ အမွှေးသန်တဲ့အမျိုးနဲ့တူတာပဲ။ ဆီးစပ်တစ်ခုလုံးမဲထူနေလို့စောက်ဖုတ်သားကိုတောင်မမြင်ရဘူး။ ထွန်းကသမီးချယ်ရီရဲ့နို့တွေကိုလက်နှစ်ဘက်နဲ့အားရပါးရ ညှစ်နယ်နေတယ်။ မာတောင်နေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုလဲလက်ဖျားလေးတွေနဲ့ဖိလိုက်ညှစ်လိုက်နဲ့ပေါ့။ စိတ်တွေထန်သထက်ထန်လာတာနဲ့အမျှ ထွန်း ကပါးစပ်ဟပြီး ချယ်ရီရဲ့နို့တွေကိုဖမ်းဟပ်ပြီးအငမ်းမရစို့တော့တာပဲဗျို့..။ ဘယ်ဘက်ကိုစို့လိုက်၊ ညာဘက်ကိုစို့လိုက်..။ “အားးးးး အမလေး…ကောင်းလိုက် တာထွန်းရယ်..ရှီးးး စစ်” ထွန်းကပါးစပ်ကိုနို့အုံကဖြုတ်လိုက်ပြီး လျှာနဲ့တလွှားချင်းတစ်ကိုယ်လုံးကိုလျက်ဆင်းလာခဲ့တာချက်အထိရောက်လာပြီ။ ထွန်းက ချက်တွင်းလေးကိုန်ှိုက်ပြီးလျှာနဲ့ထိုးထိုးလျက်တော့ချယ်ရီမှာ တွန့်ကနဲ..တွန့်ကနဲ..။ ထွန်းကလျှာကိုလျက်ဆင်းလာတာဆီးခုံမွှေးပါးပါး္ဗလေးတွေဆီ ရောက်လာပြီ။ ထွန်းရဲ့ညာလက်ကချယ်ရီရဲနို့တွေကိုနယ်နေတုန်းပဲ၊ ဘယ်လက်ကတော့စောက်ဖုတ်ဆီရွှေ့လာပြီးစောက်စိကိုချေနေပြီလေ။ အဲ့ဒီအခိုက် အတန်.မှာကျုပ်လည်း တစ်ခုခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးတံခါးရွက်ကိုဖြေးဖြေးတွန်းဖွင့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ကိုယ်ကိုတစောင်းလေးလျှိုပြီးအခန်းထဲဝင် လိုက်ပြီးတော့အခန်းဝမှာပဲအတော်ကြာငြိမ်ပြီးရပ်နေမိတယ်။ လူကသာငြိမ်နေတာလီးကတော့ပေါက်ကွဲထွက်မတတ်တောင်နေပြီ။ မိန်းကလေး၂ယောက် ကတော့သူတို့ဇောနဲ့သူတို့မို့…အခန်းထဲမှာဧည့်သည်တစ်ယောက်ရောက်နေပြီး သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပျော်ရွှင်ဖို့ကြံနေတယ်ဆိုတာမသိကြသေးဘူး။ ထွန်းက နေရာရွှေ့လိုက်ပြီးဖင်ကိုမြှောက်လို့ဒူးထောက်တဲ့ပိုဇေရှင်ပြောင်းလိုက်တယ်။
လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ချယ်ရီရဲ့တကောက်ကွေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုကိုင်ပြီးဘေးကိုဖိလို့ဖြဲချလိုက်တော့ ချယ်ရီရဲ့စောက်ဖုတ်လေးက ဟဟလေးပြဲထွက်သွား တယ်။ ဒီတော့စောက်ခေါင်းအတွင်းသားပန်းရောင်ရင့်ရင့်လေးကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ စောက်ရေကြည်တွေစိမ့်ထွက်လာနေပြီဖြစ်လို့ အခန်းမီးအလင်းရောင် နဲ့လက်လက်ပြောင်နေတယ်လို.ထင်ရတယ်။ ထွန်းကအရည်တွေရွှဲနေတဲ့ချယ်ရီရဲ့စောက်ဖုတ်ဆီကိုကုန်းလို့မျက်နှာအပ်လိုက်ပြီး၊ လျှာကိုထုတ်လို့ စောက် ဖုတ်ဝနှုတ်ခမ်းသားတွေရော၊ စောက်ခေါင်းအတွင်းသားတွေကိုပါ စိမ်ပြေနပြေလျက်တော့တယ်။ ပြီးတော့စောက်စိလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့မထိတထိထိုး ပြီးကလိပေးနေလိုက်တာ၊ ချယ်ရီရဲ့ဖင်ကကုတင်နဲ့မထိတော့ပဲလေထဲမှာကြွတက်နေပြီး၊ ထွန်းရဲ့လျှာကစားမှုကိုတုန့်ပြန်ပေးနေတော့တာ။ “အိုးးး ကောင်း လိုက်တာ၊ အရသာရှိလိုက်တာနော်..၊ စောက်ဖုတ်ရော၊စောက်စိရောပဲ၊ ရှီးးး…အားးးး” သမီးချယ်ရီကိုဘာဂျာကိုင်ပေးနေရင်နဲ့ ဘောပြားလေး ထွန်းတစ် ယောက်မှာလဲ ကြည့်ရတာကာမဆိပ်ဖီလင်တွေအပြတ်တက်လာနေပုံရတယ်။ ကုန်းမှုတ်နေရင်းက သူ့ရဲ့ဘယ်လက်နဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ကိုပြန်နှိုက်နေပြီးထုတ် လိုက်သွင်းလိုက်ပွတ်ဆွဲနေတာ၊ ကြည့်ရင်းနဲ့စောက်ရေတွေကလက်ချောင်းတွေမှာပေပြီးစီးကျလာနေတယ်။ ကျုပ်မှာလဲဆက်ပြီးအောင့်မနေနိုင်တော့ဘူး၊ ကျုပ်ဝတ်ထားတဲ့ညဝတ်အင်္ကျီကိုချွတ်၊ ဘောင်းဘီကိုလဲကြမ်းပေါ်ပုံချလိုက်တော့ မြင်းလီးအငယ်စားလောက်ရှိတဲ့ကျုပ်လီးကြီးကဖြောင်းကနဲကန်ထွက် လာပြီး၊ ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်လိုခေါင်းက ဆတ်ဆတ်..ဆတ်ဆတ်..နဲ့၊ ကျုပ်ရဲ့မျက်လုံးတွေကလဲ ကောင်မလေး၂ယောက်ရဲ့စောက်ဖုတ်တွေကိုစေ့စေ့ငုငု ကြည့်နေ၊ သုံးသပ်နေမိတယ်ဗျ။ ကျုပ်ညာလက်ကလီးကိုသေချာဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ လီးအရေပြားကိုညှစ်ပြီးရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်နဲ့တဖြတ်ဖြတ်ဆောင့်ပြီး ဂွင်းကိုင်ပေးနေလိုက်တာလီးကအသားကုန်ဆိမ့်တက်လာတယ်။
အဲ့ဒီမှာပဲကျုပ်ကိုဆတ်ကနဲလန့်သွားစေတာကတော့၊ ကျုပ်သမီးဖြစ်တဲ့ချယ်ရီမကို နှာထန်ထန်နဲ့အကြည့်လိုက်မိမှာ သမီးရဲ့အကြည့်မျက်လုံးတစ်စုံက ကျုပ် လီးကိုစီုက်ပြီးမက်မက်မောမောကြည့်နေတာပါပဲ။ ချယ်ရီကအခန်းထဲမှာကျုပ်ရှိနေတာကိုသိသွားပြီလေ။ ထွန်းကတော့ကုန်းမှုတ်နေလို.သိပုံမရသေးဘူး။ ချယ်ရီ့ပါးစပ်က လှိုက်မောတုန်ရီစွာနဲ့ ညီးတွားနေတယ်။ “အားးး အမယ်လေး ကောင်းလိုက်တာ၊ သေတော့မှာပဲ..၊ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူးးး…ရှီးးး အူးးးး..” အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျုပ်ကိုပိုပြီးထိတ်လန့်သွားစေတာကတော့..ထွန်းရဲ့လက်ထဲကအရာပဲ..၊ ဘယ်နေရာကဘယ်လိုဆွဲထုတ်လာခဲ့တယ်မသိ၊ စောစော ကမရှိပါဘူး..။ သူ့လက်ထဲမှာ ရာဘာဒီလ်ဒို လီးအတုကြီးတစ်ခု၊ ဆိုက်ကြီးက L ဆိုက်ခေါ်ရမလား အကြီးမှအကြီးကြီးပဲ။ ဘောပြားမ ထွန်းကလီးတုကြီးကို ကျုပ်သမီးစောက်ဖုတ်ဝကိုတေ့ပြီးဖြေးဖြေးချင်းထိုးသွင်းတော့တာ..။ “အိုးးး… အမလေး..နာတယ်..နာတယ်..ထွန်း..အဲဒါဘာကြီးလဲ…၊ မကောင်းဘူးး မ လုပ်ပါနဲ့..ဆွဲထုတ်လိုက်..ပြန်ထုတ်လိုက်ပါ..” “ချယ်ရီကလဲကွာ..ဒီလ်ဒိုပါကွ၊ ခံလို့ကောင်းပါတယ်။ ဒို့..ချယ်ရီ့ကို..ရာဘာလီးအတုနဲ့လိုးပါရစေကွာ..နော်..၊ ဒို့ ချယ်ရီ့ကိုချစ်တယ်။ ချယ်ရီတခြားသူတွေနဲ့မချစ်ရဘူးနော်… ခဏလေးကြိတ်ခံလိုက်ပါကွာ..တော်ကြာမနာတော့ပါဘူး၊ ဒို့ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည်ု့ပီးပါပြီ..” ထွန်းကပါးစပ်ကပြောရင်း၊ လက်ကလဲချယ်ရီရဲ့စောက်ပတ်ထဲ လီးတုကြီးကိုပိုလို့ခပ်ဖိဖိထိုးထည့်နေတယ်။ “အိုးးး တအားနာတယ် ထွန်းရဲ့…ပြန်ထုတ်..ပြန် ထုတ်လိုက်တော့..၊ အောင်မလေး စောက်ဖုတ်ပြဲပါပြီ..၊ ပါး…ပါ့ပါး..သမီးကိုကယ်ပါဦးးးး….” ကျုပ်လဲ အဲ့သလိုမြင်နေရတော့ကြည့်မနေနိုင်တော့ဘူးဗျ၊ ဏှာစိတ်တွေကပိုထန်လာသလို၊ တစ်ဘက်ကလဲ သမီးအော်နေတာတွေ့ရတော့ဒေါသတွေကထွက်လာတယ်။ ကျုပ်သမီးနုနုထွတ်ထွတ်လေး၊ ရွှေပေါ်မြတင်မွေးလာတာ တစ်ခါမှဟုတ်တိပတ်တိ ပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်ရိုက်မဆုံးမခဲ့ဖူးဘူး..။
အခုမိရွှေထွန်းက ကျုပ်သမီးကိုဆက်စ်အတွက်အသုံးချ၊ စောက်ဖုတ်နာအောင်လာဖြဲတဲ့အယောင်ဆောင်သူငယ်ချင်းပဲ…။ ကျုပ်ကုတင်နားကိုခြေလှမ်းကြဲ ကြဲနဲ့လျှောက်သွားလိုက်တာ မိရွှေထွန်းနောက်ကိုဖျပ်ကနဲရောက်သွားတယ်။ ကျုပ်သမီးရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲစိတ်ပါလက်ပါကုန်းပြီးထိုးသွင်းနေလို့ နောက်ကို ပြူးထွက်နေတဲ့ အမွှေးထူထူနဲ့ ဒင်းရဲ့စောက်ပတ်အဝကို ကျုပ်ရဲ့ မြင်းလီးအငယ်စားလောက်ဟာကြီးကိုတေ့ပြီး လက်၂ဘက်ကမိထွန်းရဲ့ဖင်ကြီးတဘက်တ ချက်ကိုကိုင်၊ နောက်ဘက်ကိုအားနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီး တပြိုင်ထဲမှာပဲ ကျုပ်ကလဲကော့ပြီးအားရပါးရခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ထိုးလိုက်တာ၊ ကျုပ်ရဲ့ဒစ်ကြီးကဇိက နဲ..ဖျစ်ကနဲ..မြည်ပြီး ဝင်သွားပါလေရောဗျို့…၊ အဆုံးမဟုတ်ပေမယ့် တစ်ချီထဲနဲ့ တစ်ဝက်ကျော်ဝင်သွားတာနဲတဲ့အားလားဗျာ..။ မိထွန်းတစ်ယောက် အင့်က နဲကိုနေသွားတာပဲ။ သူစောစောကသမီးကိုပြောနေသလို လီးအတုကြီးကိုသူကိုယ်တိုင်စမ်းခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ ဒီလောက်ဝင်သွားတာအံ့သြစရာတော့သိပ် မဟုတ်ဘူး၊ ကျုပ်ပစ္စည်းကမြင်းလီးအငယ်စားလောက်မို့လို့သာ၊ ဒီဟာမတော်တော်ထိသွားတာ၊ တော်ရုံလီးဆိုဖြုံမယ့်ပုံမပေါ်..။ “ဟင်..ဒါဘာလုပ်တာလဲ ဗျ..၊ အားးးးး အု..အစ်.. ကျနော့်ကိုမလုပ်…မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ..၊ ထုတ်ပေးပါ၊ ကျနော်နာတယ်ဗျ.. ” “မင်းက ငါ့သမီးကိုကျတော့ ပြန်ထုတ်ပေးပါလို.သေမတတ် တောင်းပန်တာတောင် ညှာတာဖို.စိတ်မကူးပဲ ဆက်လုပ်တယ်လေ..၊ ဒီလိုဘယ်ရမလဲကွ..၊ ဒီတစ်ခါ မင်းအလှည့်ပဲ…၊ ဝဋ်ဆိုတာ လည်တတ်တယ်ကွ..။ ထွန်း ကဖင်ကိုခါပြီးရုန်းဖို့၊ ရှောင်ဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ကျုပ်ကတော့ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ လီးကိုကျွတ်လုနီးပါးအဖျားထိပြန်ဆွဲထုတ်လာပြီး၊ ထွန်းရဲ့ဖင်ဆုံကြီးကိုလဲ နောက်ကိုပါနိုင်သမျှပါအောင်ဆွဲလိုက်တယ်။ြ ပီးတော့မှအားပါပါနဲ့တစ်ချက်ထပ်ဆောင့်သွင်းလိုက်ပြန်တယ်။ တစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ်ထပ်ထပ်ပြီးဆောင့် ဆောင့်သွင်းလာတာ တဖြေးဖြေးမြန်လာတာနဲ့အမျှ ဘာနဲ့တူလာသလဲဆိုတော့ ကားအင်ဂျင်ထဲကပစ်စတင်ကြီးခုတ်နေသလိုပဲ..တဗြောင်းဗြောင်းနဲ့..။
“အိုးးးး ကျနော့်ကိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ…နာတယ်..တော်ပါတော့…” အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်လုံးတီးလေးနဲ့ပက်လက်ကလေးဖြစ်နေတဲ့ သမီးချယ်ရီရဲ့မျက်နှာလေးကို ကျုပ်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ ကျုပ်တို့သားအဖ၂ယောက်မျက်လုံးချင်းဆိုင်မိပြီးအဓိပ္ပယ်ပေါင်းများစွာပါတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ပေါ့။ သမီးရဲ.ရာဂမျက်ဝန်း နဲ.အကြည့်တွေကြောင့်ကျုပ်ကိုယ်ထဲကသွေးတွေပိုဆူလာသလိုသလိုပဲ၊ စိတ်တွေလဲအသားကုန်ထန်တက်လာတာနဲ့ ထွန်းကိုဖင်ကုန်းပြီးဆော်နေတဲ့ဆောင့် ချက်တွေကမရပ်တော့ဘူး၊ မနားတမ်းပဲ..။ ယောက်ျားလျာမလေးထွန်းရဲ့ငြင်းဆန်ရုန်းကန်မှုတွေက တဖြေးဖြေးအားပျော့၊ လျော့ကျလာတာသတိထား လိုက်မိတယ်ဗျ။ “အားးး ကျွတ် ကျွတ်..ဟင်းးး ကောင်းပါပြီ..သဘောတူပါပြီဗျာ.. ထွန်းကိုကြိုက်သလိုသာလုပ်ပါတောါ…အားး အဟင့်..ပါ ပါးး..အင့်..အင့်..” ဘောပြားလေးလဲ တဖြေးဖြေးနဲ့စိတ်ပါလက်ပါဖြစ်လာပုံရတယ်။ ကျုပ်ဆောင့်ချလိုက်တဲ့အကြိမ်တိုင်းမှာဖင်ကြီးကိုကော့ကော့ပြီးနောက် ကိုပစ်ပစ်တင်ပေးနေတော့တာ။ ကျုပ်အထင် လီးအစစ်ရဲ့အရသာ၊ ယောက်ျားဆိုတဲ့အရသာကို..အခုမှသိသွားပြီထင်တာပဲ။ “အပါး..အပါး.. မြန်မြန် လေး..ပြင်းပြင်းလေးလုပ်ပေးပါ၊ ထွန်း..ထွန်း..မနာတော့ဘူး၊ ကောင်းတယ်၊ သိပ်ကောင်းတာပဲ..အိုးးးး… ထွန်း အရေတွေထွက်ကုန်ပြီ..ဟူးးး..အားးးး…” ထွန်းတစ်ယောက် ချယ်ရီ့အပေါ်မှောက်ရက်ကြီးကျသွားပြီး ချယ်ရီကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဖက်ထားတယ်။ ကျုပ်ကတော့သူ့ဖင်ကြီးကိုမလွှတ်သေးဘူး၊ အတင်းဆွဲထားတုန်းပဲ။ ပြီး…ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆက်ဆောင့်ပြီးလိုးပေးနေလိုက်တယ်။ ကျုပ်လဲသိပ်မထိမ်းနိုင်တော့ဘူးဗျို့၊ ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူး…။ အခုကျုပ်ကလိုးတော့သာ ထွန်းကိုလိုးနေတာ၊ ကျုပ်ရဲ့မျက်လုံးတွေ၊ အကြည့်တွေ၊ စိတ်တွေကတော့ ကျုပ်ရဲ့သမီးချယ်ရီဆီမှာလေ။ “သမီး လေး..ချယ်ရီ..ချယ်ရီ..ပါပါးကောင်းလိုက်တာကွာ၊ ပါပါးပြီးခါနီးနေပြီ၊ ထွက်..ထွက်တော့မယ်သမီး..” ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးဗျ..၊ ပြီးခါနီးမှာကျုပ်၊ သမီးကို တလို့အော်နေမိတယ်။ ကျုပ် လီးကိုကမန်းကတန်းပဲ ထွန်းရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး ချယ်ရီရဲ့ဘေးနားရွှေ့လာလိုက်တယ်။
အဲ့ဒီမှာပဲကျုပ်ရဲ့လရည်တွေက ဖြွတ်ကနဲ ဖြန်းကနဲ သမီးချယ်ရီရဲ့ဆီးစပ်နဲ့ဗိုက်သားရှပ်ရှပ်လေးတွေပေါ်ကိုပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တော့တာပဲ…၊ ခ သမီးရဲ့ဗိုက် ဖြူဖြူလေးပေါ်မှာ ကျုပ်ရဲ့သုက်ရည်ပျစ်ပျစ်တွေ ပေပွကုန်တော့တာပေါ့..၊ ကြည့်လို.တောင်တောင်းသေး… “အားးး ရှီး… ကောင်းလိုက်တာကွာ၊ ဒီနေ့ လောက်လီးအရသာရှိတာတခါမှမကြုံဖူးသေးဘူး” ထွန်းကချယ်ရီရဲ့ဘေးမှာမျက်နှာကိုကြမ်းပြင်ပေါ်အပ်ပြီးမှောက်ရက်ကြီးနဲ့…ပါးစပ်ကလဲ….၊ “အူးးး စစ်..ရှီး…လီး…လီး…ပါပါးရဲ့လီး.. ယောက်ျားလီးအစစ်ကြီး…ဒီလောက်ကောင်းမယ်မှန်းလုံးဝမထင်မိဘူး..လီးအစစ်ကအဲ့လိုကြီးတောင်ကောင်းတာလား…! နင့်ကနဲကိုနေတာပဲ..၊ ထွန်းသိပ်ကောင်းတာပဲ ပါပါးရယ်..” တဖြစ်တောက်တောက်နဲ.ကိုညည်းနေတယ်လေ။ ကျုပ်လဲ မောမောနဲ့ ချယ်ရီရဲတခြား ဘေးတစ်ဘက်မှာ ပက်လက်ကြီးဝင်လှဲလိုက်ပြီး၊ မျက်စိတွေမှိတ်ထားလို့အသက်ပြင်းပြင်းရှူနေမိတယ်။ ခဏကြာတော့ ဘယ်လိုကဘယ်လိုလစ်ကနဲ အိပ်ပျော်သွားတယ်မသိလိုက်ဘူး..။ ဘယ်လောက်ကြာသွားတယ်လဲမသိတော့ဘူး။ ကျုပ် အိပ်တစ်ဝက်နိုးတဝက် ဝေတေဝါးတားနဲ့ ဆတ်ကနဲအသိစိတ် လေးဝင်လာချိန်မှာ ကျုပ်လီးဆီကနူးနူးညံ့ညံ့အထိအတွေ့တစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ ခံစားချက်အရသိလိုက်ရတာကတော့ လက်ဖဝါးနုနုလေးတစ်ခု ကျုပ် လီးကိုဆုပ်ပြီး အပေါ်အောက်ပွတ်ဆွဲနေတာ…။ ခံစားချက်ထက်တောင်ကျုပ်လီးကသိပ်မြန်တယ်၊ ချက်ချင်းပဲထန်ပြီးဖြောင်းကနဲထပ်တောင်တက်လာပြန် တော့တာပဲဗျို.။ ကျုပ်မျက်စိမဖွင့်နိုင်လိုက်ခင်မှာပဲ တစ်စုံတစ်ရာကကျုပ်လီးကိုဆွဲစုပ်ဝါးမြိုလိုက်ပြီး လီးထိပ်ကနေတဖြေးဖြေးနစ်ဝင်လာတယ်၊ စပါးကြီးမြွေလား…မဖြစ်နိုင်ဘူး..။ ဘယ့်နှယ်မြွေကလီးကနေစမြိုရမှာလဲ ဟုတ်ဘူးလား..။
ပြီးတော့မြွေမြိုတာအကြောပေါင်းတစ်ထောင်ဆိမ့်ရမှာလဲ။ “အာ့ာ့.. ကျွတ်ကျွတ်..” ကြိတ်ပြီးညည်းနေတဲ့အသံလေးတစ်ခု….. ကျုပ်အသာလေးမျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရိပ်တစ်ခု၊ ပက်လက်အိပ်နေတဲ့ကျုပ်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာခွပြီးဖြေးဖြေးချင်းထိုင်ချနေတာတွေ့လိုက်ရ တယ်။ လက်နုနုသေးသေးလေးတစ်ခုကအပြင်မှာကျန်နေသေးတဲ့ကျုပ်လီးတစ်ဝက်ကိုကိုင်ထိမ်းပြီးနှဲ့နှဲ့သွင်းနေတာလေ..။ အဆုံးရောက်ခါနီးမှာတော့အား ပါပါနဲ့ဖိချပြီး.. “အား..ဟား..ဟားးးးးး.. ” ညည်းသံရှည်လေးရဲ့နောက်မှာတော့ ဖင်အားကိုသုံးပြီးရှေ့တိုးနောက်ငင်ဖိလို့ကြိတ်မွှေတော့တာပါပဲ။ ကျုပ် မျက်လုံးတွေကျင့်သားရလာပြီး အမြင်တွေကြည်လင်လာတဲ့အခါမှာ ကျုပ်ကိုယ်ပေါ်ခွပြီးထင်တိုင်းကြဲနေတဲ့သဏ္ဍာန်ကို ပြတ်ပြတ်သားသားမြင်လိုက်ရ တော့…..ဟင်..အထွန်း…….အပါးချစ်တဲ့အထွန်းရယ်..ပြီး။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged နငျ့ကနဲကိုနတောပဲ
စှမျးသမြှ ခွှေ ကြှမျးသမြှ ကွှေ